ညသုံးနာရီခွဲမှာ BRUM PRIMARK ကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ပြီး CLUBBING ထက်ပိုကောင်းတယ် - သတင်း
ညသုံးနာရီခွဲမှာ Brum Primark ကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ပြီး clubbing ထက်ပိုကောင်းတယ်
သော့ခတ်ပိတ်ခြင်း၏နိဂုံးကိုဆင်နွှဲရန်နှင့်ပျောက်သောခရစ်စမတ်ဈေးဝယ်ချိန်ကိုလိုက်မီရန်ဘာမင်ဂမ်၏ Primark ကဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ၂၄ နာရီလုံးလုံးဖွင့်ထားလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
ဤမျှကာလပတ်လုံးတက် cooped ခံခဲ့ရသည်နှင့် Snobs မနက်အစောပိုင်းနာရီများတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားရန်မလိုဘဲ, ငါနှင့်ငါ့အိမ်သူအိမ်သားများကပျော့ပျောင်းခြင်းအဘယ်သို့သောအကြောင်းကြည့်ဖို့ 3am မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ခဏလေးပါဝါငုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာငါတို့မျက်နှာဖုံးများကိုအဆင်သင့်လုပ်ပြီးခရစ်စမတ်သီချင်းများကိုဖွင့်၊ ပိတ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဈေးဝယ်စင်တာကို ၃:၂၀ လောက်ရောက်ပြီးစာသားအရခေါ်ယူခြင်းမရှိပါဘူး။ တစ်နိုင်ငံလုံးသတင်းဖော်ပြမှုပမာဏ Primark ရရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။
ငါတကယ်အလုပ်များလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်၊ မနက် ၃ နာရီတွင် Primark ကိုသွားခြင်းသည်အခွင့်အရေးတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏အိမ်သူအိမ်သား Issy ကကျွန်ုပ်အားဗလာဝင်ပေါက်၏အပြာရောင်အလင်းရောင်မှတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားစဉ်ပြောကြားခဲ့သည်။
စတိုးဆိုင်တိတ်ဆိတ်သကဲ့သို့လေထု, အေးဆေးတည်ငြိမ်ခဲ့သည်။ သင်ပုံမှန်အားဖြင့်သင် Primark ၌ရလေ့ရှိသောပုံမှန်အလုပ်များနေပြီးအနည်းငယ်လွှမ်းမိုးနိုင်သည့်စွမ်းအင်နှင့်ဝေးကွာသောအဝေးတစ်နေရာဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းအားဖြင့်လူ (၃၀) အနက်ထဲကအများစုဟာခရစ္စမတ်ဈေးဝယ်ထွက်ကုန်များပိတ်ဆို့ခံရခြင်းအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရပါတယ်။
အမြဲတမ်းကဲ့သို့ Primark သည်သင်၏ Secret Santas အတွက်အကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်များနှင့်လက်ဆောင်များ၊ မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုအတွက်လက်ဆောင်များသို့မဟုတ်သူတို့၏ကြီးမားသောအကွာအဝေးမှခရစ်စမတ်ရက်သတ္တပတ်အသစ်သို့သင်ကိုယ်တိုင်ပြုမူရန်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုသာရှိသည်။ သူတို့မှာအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေအတွက်ခရစ္စမတ်ဝတ်စုံတွေတောင်တောင်ရှိသေးတယ်၊ ဆိုလိုတာကမင်းရဲ့ကြောင်တွေ၊
ခရစ်စမတ်ခုန်များထဲမှထင်ရှားသောကြယ်ပွင့်တစ် ဦး သည် Jumper ကိုသီဆိုခဲ့သည်။ ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးအကြီးအပေမယ့်ငါ့အအိမ်ရှင်မနာရီဝက်ခန့်ခလုတ်နှိပ်ပတ်ပတ်လည်ကသယ်ဆောင်ပြီးနောက်ဝေးလျော့နည်းဝတ္ထုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဘယ်လို simp မဖြစ်ဖို့
ပြီးတော့မင်းဘာသိလဲ Primark အိမ်ကဘယ်တော့မှစိတ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဖယောင်းတိုင်တွေကတကယ်ပဲအနံ့ရှိပြီးဈေးပေါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်းတို့တွင်ဆွဲဆောင်မှုနည်းသောအိမ်ပုံစံအချို့ရှိသည်။ ဤအအိမ်မှာဆိုင်းဘုတ်များတ ဦး တည်းကိုပိုင်ဆိုင်ပေမယ့်ဖွင့်ရိုးသားပါစေကုန်အံ့, ဤတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ, ရယ်မောခြင်း, ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်းဘုတ်များကဲ့သို့မကောင်းပါသောသူမည်သူမဆို slate ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
- Charlotte Wright (@Char_wrightx) ဒီဇင်ဘာလ 3, 2020
ဆိုင်မည်မျှလွတ်သည်ကို၎င်း၊ သင်၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင်အခြေခံအားဖြင့်အချည်းနှီးဖြစ်သော Primark တွင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဟူသောအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အားသာချက်ယူရန်နှင့်ပျော်စရာအနည်းငယ်ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
THE Billie Eilish သည် Primark ၏ကုတ်အင်္ကျီအိတ်၌ခရစ်စမတ်ဈေးဝယ်ခြင်းအနည်းငယ်သာပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ လုကာသည်ကိုယ်တိုင်ရေးလက်မှတ်တောင်းရန်အလွန်ကြောက်ခဲ့သည်။ ဒီဟာကဆံပင်ညှပ်တဲ့လူပဲ၊ ငါတို့ကနံနက် ၃ နာရီမှာ Brum ရဲ့ဆင်ခြေဖုံးတွေမှာရှိနေလို့ပေါ့စတားစတားတစ်ယောက်ရဲ့အခွင့်အလမ်းဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ပါးလွှာပေမဲ့၊ အနည်းဆုံးသူကငါနဲ့အတူမနက် ၃ နာရီမှာ Primark ကိုရောက်လာတယ်။
Tier3post lockdown တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းကြောင့်လည်းလူအများအပြားကိုတော်တော်လေးထိမိခဲ့ရသည်။ Primark ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်သူတို့၏ညကိုရွေးချယ်ခဲ့သူ Snobs လည်းပျောက်နေသေးသည်။ ခါးပတ်အပိုင်းထဲမှာထွက်ည? ဟုတ်ကဲ့
လမ်းမှာငါတို့ Dick နှင့် Dom နှင့်သူတို့၏အထင်ကရဂိမ်း bogies သရုပ်ဆောင်ဂန္ CBBC ပြပွဲနှင့်ပတ်သက်။ အဟောင်းကိုပြန်ပြောပြအဟောင်းကိုပျော်စရာအနည်းငယ်ရှိသည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါတို့တွေထူးဆန်းတဲ့အသွင်အပြင်တွေရခဲ့ပေမဲ့မျက်နှာဖုံးတွေကဒီနေရာမှာငါတို့အကျိုးအတွက်ပဲ။ သင်စကားပြောသောအခါသင်၏ပါးစပ်ရွေ့လျားမှုကိုမည်သူမျှမမြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင့်ကိုထူးဆန်းစွာကြည့်နေသူကသင့်ကိုကြည့်နေသောလူကိုပြန်ကြည့်လျှင်၎င်းသည် Spiderman meme နှင့်တူသည်။
Bogies (ကီဗင်ရှုပ်ထွေးသွားသည်အထိ) pic.twitter.com/j7FF7Xi6xU
ဒါကသိပ်အချည်းနှီးပဲလို့ကျွန်မတို့ကရယ်မောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့အိမ်ဖော်တွေကိုသူတို့တွေ့နိုင်တဲ့အဆိုးဆုံးဝတ်စုံကိုဖန်တီးဖို့တာဝန်ပေးခဲ့တယ်။ Primark ကိုတခါတရံတွင်၎င်း၏ * သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသောဖက်ရှင်အသိကြောင့်လူသိများပြီးလုကာနှင့်ကီဗင်ဖန်တီးခဲ့သောဤ ၀ တ်စုံများသည်ချွင်းချက်မရှိပါ။ ဒါဟာငါ့အတွက်ဟယ်ရီပေါ်တာလွမ်းသူ့ပန်းခွေလည်ဆွဲပါ။
ကီဗင်ရဲ့မတ်မတ်တစ် ဦး tad ပိုပြီးအရှုပ်တော်ပုံကြီးခဲ့ပေမယ့်သင်တစ် ဦး တွန်းအားပေးတက်ဘရာစီယာများနှင့်ကျားသစ် Leggings အတွက်အိမ်တော်ကိုစွန့်ခွာလို့မရဘူးသူကပြောပါတယ်သူ 2020. ရဲ့လား အချို့သောသှေးဆောငျမှုအပြီးတွင်သူသည်နောက်ဆုံးတွင် Fab အားပြန်လာနိုင်မည့်သူ၏နောက်ထပ်အဝတ်အစားဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
တကယ်တော့, ဆိုင် Covid အကြောင်းပြချက်များအတွက်ပိတ်ထားလျက်ရှိသောပြောင်းလဲနေတဲ့အခန်းကဏ္ an ပင်ပြanနာမဟုတ်ခဲ့နိုင်အောင်ဗလာဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်၏ PJ အသစ်များကိုသဲကန္တာရ၌ရှိသောဇိမ်ခံပစ္စည်းများကိုစမ်းသုံးကြည့်နိုင်သည်။
Primark အလွန်စွန့်ခွာသွားသည်ကိုတွေ့ရခြင်းသည်ထူးဆန်းသည့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရပ်ဂ်ဘီသူငယ်တစ်ယောက်သည် Tiv ကိုမသွားဘဲလမ်းလျှောက်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်နှင့်တူသည်။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီကြားကကျွန်တော်တို့အားလုံးကို Christmassy ခံစားချက်နဲ့ခံစားခဲ့ရတယ်။
• ဘာမင်ဂမ်ရှိ Primark ကိုယနေ့ ၂၄ နာရီဖွင့်နိုင်သည်
• 'စျေးနှုန်းတွေအတူတူပါပဲ': ဒီ Brum ကျောင်းသား Primark အတွင်းပိုင်းပထမ ဦး ဆုံးပြန်၏တ ဦး တည်းဖြစ်ခဲ့သည်
• PRIMARK ကို Amazon တွင်သင်ယခု ၀ ယ်ယူပြီးနောက်လာမည့်နေ့ကိုရနိုင်သည်